आज मंगलबार भगवान गणेशको दिन, के गर्दा शुभ मानिन्छ ? किन गर्ने भगवान श्रीगणेशको पूजा ? – Butwal Sandesh
आज मंगलबार भगवान गणेशको दिन, के गर्दा शुभ मानिन्छ ? किन गर्ने भगवान श्रीगणेशको पूजा ?
आज मंगलबार । मंगलबार भगवान गणेशको पूजा अर्चना र व्रत बस्दा फाइदा पुग्ने हिन्दू धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।कुनै पनि शुभ कार्यको सुरुवात गर्दा सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशको पूजा गरिन्छ। मंगलबार सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुद्ध मनले भगवान श्रीगणेशको पूजा गर्नु उत्तम मानिन्छ।
मंगलबार व्रत बसेर पूजा आराधाना गर्नाले मनोकामना पूरा हुने धार्मीक विश्वास छ।शास्त्रमा भगवान गणेशको पूजा विधि १६ भागमा उल्लेख गरिएको छ।
आसन : भगवान गणेशलाई आह्वान गरिसकेपछि ॐ गं गणपतये नम: आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । मन्त्र जप्दै उनका लागि आसनका लागि ठाउँ दिनुपर्छ ।आसनको अर्थ आह्वान गरिएका गणेशलाई आफ्नो पूजा घरमा विराजमानका लागि ठाउँ दिनु हो ।
त्यसैगरी मंगलबारका दिन भगवान गणेशसँगसँगै भगवान हनुमानको पनि पूजा हुने गर्दछ।
हिन्दू शास्त्रका अनुसार मंगलबारको सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग हुन्छ । संकटको समयमा मानिसको उर्जा हानी हुने गर्छ।त्यसैले यस दिन हनुमानलाई प्रशन्न पार्ने काम गरिन्छ।
मंगलबार बिहान राम मन्दिर जानुहोस् । मंगलबार हनुमानको दर्शन गर्दा मानिसमा नयाँ उर्जा पैदा हुन्छ।
मंगलबार बिहान बच्चाको सिरानीमा फिटकरी राखिदिनुहोस् । यसो गर्दा बच्चामा सुत्दा डराउने समस्या हटेर जाने गर्दछ।
एउटा धागोमा खुर्सानीमाथि, बीचमा कागती र तल पनि खुर्सानी राखेर कुनै व्यवसाय गरेको ठाउँ वा घरको ढोकामा राख्नुहोस् । यसले नकारात्मक उर्जा समाप्त गर्ने काम गर्दछ।
मंगलबार बेलुका हनुमानलाई गुलाब चढाउनुहोस् । यसो गर्दा जीवनमा रहेका समस्या समाधान हुन्छन।
मंगलबार रामस्तोत्र पढ्ने गर्नुहोस् । जसले शुभ कामको थालनी गर्दा लाभ प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्छ ।
मंगलबार शुद्ध ध्यु वा तेलको बत्ती बालेर मात्रै हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईको मनकामना पूर्ण हुनेछ।